फिलहाल, विश्वको लगभग हरेक देशले कृषि मशीनरीको प्रदर्शनी राख्छ। रूसको सबैभन्दा बढ्दो प्रतिमा मास्को (200 9) मा जेएओ पीटर्सबर्ग ट्राक्टर प्लाटरको प्रदर्शनी थियो, जसमा सबैभन्दा ठूलो ट्राक्टरको किरोभेट K-9520 देखाइएको थियो। तर यसको प्रभावशाली आकार र तकनीकी विशेषताहरूको बावजूद, यो अझै पनि यसको अमेरिकी सहयोगी "बिगबाउ-747" गुणस्तर भन्दा बढी छैन, जुन 30 भन्दा बढी वर्षका लागि विश्वको सबैभन्दा ठूलो ट्रयाक्टर मानिन्छ।
यी दिमागहरू विशेष र अद्वितीय छन्?
यस "विशाल" को निर्माण अमेरिकी आविष्कारक-करोड़पति रॉन हार्मोनमा संलग्न भएको थियो, जसले त्यसो त डिजाइनर ब्यूरो "उत्तरी मानफिच्युक्चर" सँग सहकार्यको साथ सहयोग गर्यो। वास्तवमा, रॉनले नयाँ सुपर ट्रयाक्टर सिर्जना गर्ने आशा गरेन, जुन विधानमन्त्री रेखामा धारावाहिक उत्पादन गरिनेछ। "बिगबाउ-747" को एक एकल प्रतिलिपि मा दुई भाइहरू-ए्रोरोनोमास्टर्स रोसी को लागी विकसित गरिएको थियो, जो कि 70 मा कैलिफोर्नियाको बेकर्सफील्ड शहरमा कपासको खेतीमा संलग्न थिए। आज सम्म, संसारमा सबैभन्दा ठूलो ट्रयाक्टर अमेरिकाको खेतमा जान्छ र यसको सम्पूर्ण अस्तित्वमा सामूहिक उत्पादनमा राखिएको छैन। सबैभन्दा रोचक के हो, 37 वर्षको लागी संसारमा कुनै पनि कम्पनीले यस्तो प्रविधिको विकास गरेको छ जुन "बिग-बन्ड" आयामहरू र विशिष्टताहरूसँग समान आयामहरू छन्।
विश्वमा सबैभन्दा ठूलो ट्रयाक्टर के हो?
यो बाहिर जाने बित्तिकै, यस उपकरणको क्षमता प्रति दिन 400 हेक्टेयर मिट्टी को लागी सङ्कलन गर्न पर्याप्त छ। एक विशाल 30-मीटरको ट्रयाक्टरलाई टयाक्टरमा चढाइयो, जुन पृथ्वीलाई 120 सेन्टिमिटरसम्म गहिराइमा राख्न सक्षम छ। यस्तो उत्पादकता कुनै पनि आधुनिक कृषि मशीनरी को घमण्ड नहीं गर्न सक्छ ।
अमेरिकन "बिगबाउ-747" को तकनीकी विशेषताहरू
हूड अन्तर्गत संसारको सबैभन्दा ठूलो ट्रयाक्टरले 760 घोडा पावरको क्षमतासँग 16-सिलिन्डर डीजल इन्जिनलाई लुकाउँछ। यस एकाइ को विकास कम्पनी "डेट्रोइट डीजल" मा शामिल थियो। स्वाभाविक रूपले, यस्तो विशाल को भूखान अदभुत थियो। एक मिनेटमा "बिगबिड-747" ले 65 लीटर डीजल ईन्धन खर्च गर्यो। तर, यसका बावजूद , ट्रयाक्टर धेरै सानो इन्धनको ट्याङ्क (केवल 567 लिटर) संग सुसज्जित थियो। यस प्रकार, ट्रयाक्टर को भरने वाला एक पूर्ण केवल 8-10 मिनेट को लागि पर्याप्त थियो। कुल ट्रयाक्टर 6-गति गियरबक्स। यहाँ ब्रेकिंग प्रणाली र साथसाथै भारी-कर्तव्य वागनहरू, वायु प्रकार (सबै पाङ्ग्राहरूमा)।
आयामहरूको लागि, "BigBud-747" सजिलैसँग यसको आयामको साथमा छ: लम्बाइ 8200 मिलिमिटर हुन्छ, चौडाइ 6000 मिलिमिटर हुन्छ, उचाई 4200 मिलिमिटर हुन्छ। ट्राक्टरको सुसज्जित वजन 45.5 टन छ।
यो "अमेरिकी" को लागि टायर व्यक्तिगत रूपमा विकसित क्यानाडा कम्पनी "संयुक्त टायर कम्पनी" द्वारा विकसित गरिएको थियो। वैसे, टायर को व्यास 240 सेन्टिमिटर बराबर छ। यस्तो ठूलो पाङ्ग्राहरू र इञ्जिन प्राप्त गर्दा, "बिगबाउ-747" को तुरुन्तै शीर्षक "संसारमा सबैभन्दा ठूलो ट्रयाक्टर" शीर्षक दिइएको थियो।
आज "बिग बुड" को भाग्य के हो?
11 वर्षपछि यसको प्रयोग, 1988 मा भाइहरू रसीसीले यो प्रविधिको खेत "विल्रोब्रो खेत" मा फैलाउने निर्णय गरे, जुन फ्लोरिडा राज्यमा स्थित छ।9वर्षसम्म उनीहरूले निरन्तर ढोका र माटोलाई लुगा लगाए। र 1997 मा "बिग बुड" नयाँ मालिकको हातमा पारियो, र अब उहाँ मन्टानामा आफ्नो सानो मातृभूमिमा हुनुहुन्छ। नयाँ स्वामीको लागी, यो थोडा अपग्रेड गरिएको थियो र 90000 ह्याण्डसेभरको क्षमता संग एउटा नयाँ डीजल इन्जिन पाईयो। विशेषज्ञहरूको अनुसार, आजको लागत लगभग 600 हजार डलर छ।
आज सम्म, यो ट्राक्टर एक बिल्कुल काम गरिरहेको अवस्थामा छ र अझै पनि खेती को मिट्टी को प्रसंस्करण र ढीला छ।
रूसी नायक - "कीरोवेट्ट 95 9"
यसको अमेरिकी समकक्षको विपरीत, रूसमा सबैभन्दा ठूलो ट्रयाक्टरले थोडा कमजोर इन्जिन (516 "घोडाहरू") र एउटा अझै अर्को आधुनिक डिजाइन छ। साथै लायक यो पुरानो कीरोवोसा श्रृंखला - K-744R3 M1 को 428-लीटर ईन्जिनियरिङ्को नयाँ संशोधन हो। संग।
ट्राक्टरका दुवै मोडेलहरू नवीनतम प्रविधिसँग सुसज्जित छन्, र सबै घटकहरू विश्वका अग्रणी निर्माताहरूद्वारा निर्मित हुन्छन्। त्यसोभए, आधुनिक "K-744R3" टर्बो-डीजल इन्जिन "एमबी ओएम 457 ला" र कम्पनी "बोस्च" बाट जर्मन अक्षीय-पिस्टन हाइड्रोलिक प्रणालीसँग सुसज्जित छ। निर्माताको अनुसार, "K-9520" र "K-744R3 M1" मोडेलहरू उच्च प्रदर्शन, शक्ति छन्, सुविधा र आधुनिक उपस्थितिको सजिलैबाट विशेषता हुन्छन् (तस्बिर हेर्नुहोस्)।
रूसमा सबैभन्दा ठूलो ट्र्याक्टर, K-9520 सीरीज किरोव प्लास्टको सबैभन्दा नयाँ विकास हो, जसले आफ्नो पूर्ववर्तीहरूको सबै भन्दा उत्कृष्ट सुविधा पाएको छ: एक विश्वसनीय डिजाइन, एक शक्तिशाली र आर्थिक मोटर। वास्तवमा, पछिल्लो केहि वर्षमा, घरेलू प्रविधिको विकासको गति यति उच्च रहेको छ कि यो विश्वस्त बजारमा अर्को 5-10 बर्षमा रूसी ट्र्याक्टरहरू अग्रणी हुनेछ।
त्यसोभए, हामीले अमेरिकी मूल "बिग बुड 747" को दुनियामा सबैभन्दा ठूलो ट्र्याक्टरको टेक्नोलॉजी विशेषताहरू र नयाँ रूसी "हीरो" कीरोभेट K-9520 को विशेषताहरू समीक्षा गर्यौं।
एन्टिओरोरोसिव प्राकृतिक वर्णक - लीड ओक्साइड
रकी माटो निर्माणमा
उत्पाद गुणस्तरको मूल्यांकन
हाइड्रोटेक्निकल निर्माण: प्रकार र वर्गीकरण, फोटो
Aimp - kopyutera लागि ठूलो खेलाडी
Daria द्रोज्दोव्स्काया - को Firebird कान्छो छोरी
यहूदी भोजन (मास्को) को सर्वश्रेष्ठ रेस्टुरेन्ट। रेस्टुरेन्ट, ठेगाना, समीक्षा सूची
टमाटर सान Marzano: विशेषता
हेर्ने हटाउन हराएको समय, वा केहि को सपना?
विवरण तस्वीर Grigoriev "गोल रक्षक"। चित्र "गोल रक्षक" Grigorieva
सौर संग्रहकर्ता आफ्नो घर हीट: समीक्षा
के विश्वविद्यालय बाट संस्थान distinguishes: बाद छान्ने लाभ
को Novotroitskoye जलाशय कहाँ छ? मनोरञ्जन केन्द्र Novotroitskaya "भेनिस" र धेरै अन्य
उपनगरीय होटल पाइन नदी होटल (Obninsk): सिंहावलोकन, सेवा र समीक्षा विवरण